The Best Cities In Europe Waayo Vegetarians | Save A tareenka
Home > safarka Europe > The Best Cities In Europe Waayo Vegetarians
Liiska oo ka mid ah magaalooyinka ugu fiican Yurub vegetarians waxay bilowdey in ay ugu dambayntii heli dheer. Waxaa laga yaabaa in ay wax yar ka raagay inuu heli socday laakiin khudaar goobta ugu dambeyntii waxaa iska. Waxaynu wada ognahay in suxuunta hilibka shay-xukumid bedeley ah wadamo badan oo Yurub. Laakiin wax is beddeleen. Maalmahan, uma baahnid inaad ku gaajoon haddii aad tahay khudaar ah u safraya. Mana waa in aad si gaar ah u qabtaan naftaada.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah magaalooyinka ugu fiican Yurub vegetarians iyo sidaad u tagi karto tareen.
magaalooyinka ugu fiican Yurub vegetarians: Berlin, Germany
Daacadii, socday hilib-free uu leeyahay qaar ka mid ah restauranteers more waddani swoling ugu maleeyeen, laakiin maqaayado in aad wax ku duubay, waxaan koofiyadaha our iska inaad! Berlin hadda waxay bixisaa soo diyaariyeen cajiib ah maqaayado iyo khudrada. Waxaan ka hadleynaa jalaato vegan u xoogna bdadanina cajiib ah. Inta badan makhaayadaha iyo khudrada ee Berlin waa tayo sare leh iyo rayn sidoo kale super. Berlin ayaa xitaa la odhan jiray The New Khudrad Capital dunida by Saveur in 2015. Oo xataa Hudheelka ugu dhaqameed, waxaa jira fursado ku haboon cuna oo bdadanina waxay naga mid ah.
magaalooyinka ugu fiican Yurub vegetarians: Barcelona, Spain
gabi ahaanba Waxaan jeclahay Sain iyo sida ay u riyaaqeen cunto Khudrada iyo midebkooda! Barcelona, khaas ahaan, waa sidaas oo isha ku haya inuu noqon dhaweynayey, laftiisa dhawaaqay 'khudaar-friendly, saaxiib la ah dhaqanka vegan iyo khudrada ee March 2017. City Hall xitaa soo saaray Daliil khudaar gaar ah si ay magaalada oo uu ku dhiirri-galiyay dadka deegaanka si ay u tijaabiso Isniinta hilib-free. Like meelaha ugu, waxaad ka heli doontaa isku dhafka ah ee meelaha khudaar-friendly fudud iyo maqaayado Gaarna vegan sida BioBento iyo si haboon-magacaabay bdadanina Garden. lover cake? Markaas waxaad u baahan tahay in ay booqdaan Santoni Cafe, taas oo u adeegta vegan pizza, doolshe vegan, iyo croissants vegan, ka mid ah kuula dhaqmo kale delicious.
magaalooyinka ugu fiican Yurub vegetarians: Stockholm, Sweden
Haddii aad raadineyso weeyna cuntada wanaagsan iyo khudrada-rakaab ka dibna eegto wax dheeraad ah ka badan Stockholm. Tani magaalada Scandinavian caan hubaal ka dhigaysa our liiska The magaalooyinka ugu fiican Yurub vegetarians. Sidoo kale super fudud si aad u hesho si ay u tareen! Mid ka mid ah makhaayad iyo khudrada aan ka maqnaan doona: Qaar badan oo ka qabaa Hermans (www.hermans.se) waa makhaayad ugu wanaagsan ee khudaarta ee Europe. Waxay bixiyaan loo dhan aad-cuni kartaa reerkeyga iyo khudrada la view cajiib ah oo magaalada.
magaalooyinka ugu fiican Yurub vegetarians: London, England
yaabay? Waxaana sidaas ma qabaa! runtii London oo dhan ayaa! Oo ay ku jiraan qadar cajiib fursado midebkooda. Soho faanaa ugu horeysay dhan-khudaar baar ee dalka - tababaraha The & Fardo waa London ee (oo waxaa laga yaabaa in England ee) makhaayad khudrada-ugu wanaagsan ee loo yaqaan. Waxay bixisaa vegan oo bdadanina slants on Classics baar British. Haddii aad dareensan tahay adventurous ka dibna Vanilla Black waa meesha aad u baahan tahay inaad! Waxaan ku talinaynaa avocado u qabow la cad saytuunka ah iyo Yeruusaalem cake artichoke ku caano lowska Brazil iyo kaabash. Sanqadhaha ka duufsan qof, ma vegetarians kaliya.
magaalooyinka ugu fiican Yurub vegetarians: Glasgow, Scotland
Glasgow – Iska ilow kaliya khudrada, waa mid ka mid ah dalka ee magaalooyinka vegan-friendly ugu, iyo marsada ah sii kordhaysa waayo, waxyaalahan oo dhan iyo khudrada.
Waxa ay u muuqataa sida ay jiraan oo bdadanina cusub ama vegan kulkulul furitaanka dhowaad todobaadle ah, iyo baahida waayo, waa hubaal waxaa. Waqti ka dib markii uu ku guuleystay meesha ugu vegan-saaxiibtinimo ee UK. VegFest (iid vegan ugu weyn Yurub) ayaa sidoo kale ku daray Glasgow in ay liis.
Waxaa jirtay waqti ka fiican haatan inay jartaan tareenku in ay meel kasta ku yaala Europe la SaveaTrain haddii aad tahay khudaar ama vegan!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcities-europe-vegetarians%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#healthyFood #Travelhealthy #midebkooda #Khudrad Cuntada Foodie longtrainjourneys talooyin tareenka tareen safarka